၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (5 of 10)
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (5 of 10) zawgyi
(ခ-၁) ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်တို့ အားကြီးလာမှုက အဖန်တလဲလဲ အထုံရသည့် အာသေ၀န၏ သတ္တိပေတည်း။ ထို့ကြောင့် အာသေ၀န ကျေးဇူးပြုရာတွင် မျိုးဇာတ်တူရပါသည်။ (ကု ကု ။ အကု အကု)
(ခ-၂) အာသေနပစ္စည်း၌ ဇာတ်တူချင်းသာ ကျေးဇူးပြုသည်။ ပထမဇောရှေ့က ၀ုဋ္ဌော ဇာတ်မတူပါ။ သတ္တမ ဇောနောက်က တဒါရုံကလည်း သတ္တမဇောနှင့် ဇာတ်ချင်းမတူပါ။ ထို့ကြောင့် ပထမဇောကြဉ်သော။ သတ္တမဇော ကြဉ်သောဟု စာထဲ ဖတ်ရှုရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(ခ-၃) ဇောဟူသည် အရှိန်အဟုန်ပြင်းလွန်းသောကြောင့် အာရုံပေါ်မူတည်ပြီး – ၇ ကြိမ်ခန့် ဖြစ်ပါသည်။ ဇော အမျိုးအစားများမှာ ကုသိုလ်ဇော၊ အကုသိုလ်ဇောနှင့် ကြိယာဇောတို့ ဖြစ်သည်။
(ခ-၄) အာသေ၀နပစ္စည်းက ဇောကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ဇောခုနှစ်ကြိမ်သည် တူညီသည့်သဘာဝဖြင့် အထပ်ထပ် ဖြစ်လေ့ရှိပါသဖြင့် ပဂုဏ အလေ့အကျင့်ရလာပြီး ဗလ၀ အားကောင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ-၅) ဇောရှေ့မှ စက္ခုဝိညာဏ်၊ သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း၊ သန္တီရဏ ၊၀ုဋ္ဌောတို့ သည် မည်သည့်စွမ်းရည်သတ္တိမျှ မရှိကြပေ။ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခြင်းသာတည်း။
(ခ-၆) အတီတဘင် = ကောင်းကျိုးလည်းမပေးနိုင် ဆိုးကျိုးလည်း မပေးနိုင်ပါ။
ဘ၀င်္ဂစလန = ကောင်းကျိုးလည်းမပေးနိုင် ဆိုးကျိုးလည်းမပေးနိုင်ပါ။
ဘ၀င်္ဂုပစ္ဆေဒ = ကောင်းကျိုးလည်းမပေးနိုင် ဆိုးကျိုးလည်းမပေးနိုင်ပါ။
ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်း ။ သမ္ပဋိစ္ဆိုန်း ။ သန္တီရဏ။ ၀ုဋ္ဌော တို့ကလည်း ကောင်းကျိုးလည်း မပေးနိုင် ဆိုးကျိုးလည်း မပေးနိုင်ပါ။ ဇောက ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး ပေးနိုင်ပါသည်။
(ခ-၇) ရှေးရှေးဇောက ချုပ်ချုပ်သွားပါသော်လည်း သူ့မှာရှိသည့် စွမ်းအားကို အကြိ်မ်ကြိမ် ထုံမွမ်း ထုံမွမ်း ပေးလိုက်သည်။ ပမာပြရသော် ပန်တိမ်သည်သား ဘ၀များစွာ ရွှေနှင့် ထုံခဲ့၊ ရွှေနှင့်မွေ့လျော်ခဲ့သဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓက ပန်တိမ်သည်နှင့်သင့်လျှော်သည့် ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပေးတော်မူခဲ့သည်။
(ခ-၈) အကြိမ်ကြိ်မ် ထုံမွမ်းထားသဖြင့် repetitive condition ကြောင့် အားရှိနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အနန္တရမျိုးထဲ ပါဝင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အာသေ၀နပစ္စည်း၏ အထောက်အပံ့ရပါက ဇောအားရှိပြီး၊ မရပါက အားမရှိပေဟု အဋ္ဌကထာ comentry ။ sub comentry ကျမ်းတို့က ပြဆိုပါသည်။
(ခ-၉) သတ္တ၀ါတို့၏ သဏ္ဍာန်၌ ဇောစိတ်တွေက အာသေ၀န သတ္တိရပါသည်။ ကုသိုလ်အမှု၌ ကုသိုလ် သတ္တိရသည်။ အကုသိုလ်၌လည်း အကုသိုလ်သတ္တိရမည်။ ထို့ကြောင့် သတ္တ၀ါတို့၏ သဏ္ဍာန်တွင် အထပ်ထပ် ထုံမွမ်းကာ Repetation. Doing something again and again. ဖြစ်နေကာ ကု၊ အကု တို့ အားကောင်း နေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁၂- အာသဝေနပစ်စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (5 of 10) pyidaungsu – unicode
(ခ-၁) ကုသိုလျ၊ အကုသိုလျတို့ အားကွီးလာမှုက အဖနျတလဲလဲ အထုံရသညျ့ အာသဝေန၏ သတ်တိပတေညျး။ ထို့ကွောငျ့ အာသဝေန ကြေးဇူးပွုရာတှငျ မြိုးဇာတျတူရပါသညျ။ (ကု ကု ။ အကု အကု)
(ခ-၂) အာသနေပစ်စညျး၌ ဇာတျတူခငျြးသာ ကြေးဇူးပွုသညျ။ ပထမဇောရှကေ့ ဝုဋ်ဌော ဇာတျမတူပါ။ သတ်တမ ဇောနောကျက တဒါရုံကလညျး သတ်တမဇောနှငျ့ ဇာတျခငျြးမတူပါ။ ထို့ကွောငျ့ ပထမဇောကွဉျသော။ သတ်တမဇော ကွဉျသောဟု စာထဲ ဖတျရှုရခွငျး ဖွဈပါသညျ။
(ခ-၃) ဇောဟူသညျ အရှိနျအဟုနျပွငျးလှနျးသောကွောငျ့ အာရုံပျေါမူတညျပွီး – ၇ ကွိမျခနျ့ ဖွဈပါသညျ။ ဇော အမြိုးအစားမြားမှာ ကုသိုလျဇော၊ အကုသိုလျဇောနှငျ့ ကွိယာဇောတို့ ဖွဈသညျ။
(ခ-၄) အာသဝေနပစ်စညျးက ဇောကို ရညျညှနျးပါသညျ။ ဇောခုနှဈကွိမျသညျ တူညီသညျ့သဘာဝဖွငျ့ အထပျထပျ ဖွဈလရှေိ့ပါသဖွငျ့ ပဂုဏ အလအေ့ကငျြ့ရလာပွီး ဗလ၀ အားကောငျးလာခွငျးဖွဈသညျ။
(ခ-၅) ဇောရှမှေ့ စက်ခုဝိညာဏျ၊ သမ်ပဋိစ်ဆိုနျး၊ သန်တီရဏ ၊ဝုဋ်ဌောတို့ သညျ မညျသညျ့စှမျးရညျသတ်တိမြှ မရှိကွပေ။ ဖွဈရိုးဖွဈစဉျ တာဝနျ ထမျးဆောငျခွငျးသာတညျး။
(ခ-၆) အတီတဘငျ = ကောငျးကြိုးလညျးမပေးနိုငျ ဆိုးကြိုးလညျး မပေးနိုငျပါ။
ဘဝင်ျဂစလန = ကောငျးကြိုးလညျးမပေးနိုငျ ဆိုးကြိုးလညျးမပေးနိုငျပါ။
ဘဝင်ျဂုပစ်ဆဒေ = ကောငျးကြိုးလညျးမပေးနိုငျ ဆိုးကြိုးလညျးမပေးနိုငျပါ။
ပဉ်စဒှါရာဝဇ်ဇနျး ။ သမ်ပဋိစ်ဆိုနျး ။ သန်တီရဏ။ ဝုဋ်ဌော တို့ကလညျး ကောငျးကြိုးလညျး မပေးနိုငျ ဆိုးကြိုးလညျး မပေးနိုငျပါ။ ဇောက ကောငျးကြိုးဆိုးကြိုး ပေးနိုငျပါသညျ။
(ခ-၇) ရှေးရှေးဇောက ခြုပျခြုပျသှားပါသျောလညျး သူ့မှာရှိသညျ့ စှမျးအားကို အကွိမျကွိမျ ထုံမှမျး ထုံမှမျး ပေးလိုကျသညျ။ ပမာပွရသျော ပနျတိမျသညျသား ဘဝမြားစှာ ရှနှေငျ့ ထုံခဲ့၊ ရှေနှငျ့မှလြေ့ျောခဲ့သဖွငျ့ မွတျဗုဒ်ဓက ပနျတိမျသညျနှငျ့သငျ့လြှျောသညျ့ ကမ်မဋ်ဌာနျးကို ပေးတျောမူခဲ့သညျ။
(ခ-၈) အကွိမျကွိမျ ထုံမှမျးထားသဖွငျ့ repetitive condition ကွောငျ့ အားရှိနခွေငျး ဖွဈပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အနန်တရမြိုးထဲ ပါဝငျခွငျး ဖွဈပါသညျ။ အာသဝေနပစ်စညျး၏ အထောကျအပံ့ရပါက ဇောအားရှိပွီး၊ မရပါက အားမရှိပဟေု အဋ်ဌကထာ comentry ။ sub comentry ကမျြးတို့က ပွဆိုပါသညျ။
(ခ-၉) သတ်တဝါတို့၏ သဏ်ဍာနျ၌ ဇောစိတျတှကေ အာသဝေန သတ်တိရပါသညျ။ ကုသိုလျအမှု၌ ကုသိုလျ သတ်တိရသညျ။ အကုသိုလျ၌လညျး အကုသိုလျသတ်တိရမညျ။ ထို့ကွောငျ့ သတ်တဝါတို့၏ သဏ်ဍာနျတှငျ အထပျထပျ ထုံမှမျးကာ Repetation. Doing something again and again. ဖွဈနကော ကု၊ အကု တို့ အားကောငျး နကွေခွငျး ဖွဈပါသညျ။
12. Āsevana Paccaya, General